Cunnooyinka & Cabbitaanada Cuntada & Cabbitaanka ee Waxsoosaarka & Soosaarka Alaabada iyo Sheekooyinka by Alietc.com - Alietc.com
Saliidda Galleyda ee ugu Fiican Caafimaadka
Saliidda galleydu waa saliidda laga helo iniinta hadhuudhka. Adeegsigeeda asaasiga ah waa karinta, halkaasoo qiiqa qiiqa sare ka dhigayaa saliida hadhuudhka saafiga ah saliid shiil qiimo leh. Sidoo kale waa qayb muhiim ah oo ka mid ah noocyada maaddada margarine qaarkood. Saliida hadhuudhku badanaa way ka qaalisan tahay noocyada kale ee saliidaha khudradda. Asalka […]Read More
Shaaha Cagaaran - Maxaad Kugu Cabaysaa Koob Maalin Walba
Waa maxay shaaha cagaaran? Shaaha cagaaran waa shaah u gaar ah oo laga diyaariyo dhirta iyo ubaxyada Camellia sinensis. Ma aysan soo marin habka qallajinta iyo habka oksidheer ee loo isticmaalo shaaha madow. Shaaha cagaaran wuxuu ka bilaabmay Shiinaha, laakiin soosaaridiisa iyo soo saaristeeda ayaa ku baahay dalal kale oo ku yaal Bariga Aasiya. Taariikhda shaah cagaaran: Cagaar […]Read More
Vinegar Black - Waa Bedelka ugu Wanaagsan ee Loogu Talo Galayo Daawooyinka
Waa maxay khalka madow? Khamriga madow waa khalka Shiinaha oo sida caadiga ah laga sameeyo bariiska qallalan waxaana badanaa loo isticmaalaa suugada suugada. Waa wax ka yar sheyga ama khalka khamriga cad. Midabka hadhka leh iyo dhadhanka, dhadhanka qiiqa ayaa ka dhigaya mid la mid ah khal khalka ah, si kastaba ha noqotee, had iyo jeer ma aha mid sonkor leh. Sida ballamikada oo kale, ayaa inbadan […]Read More
Cabitaannada Tamarta -Maalinta Kale ee Tamarta?
Cabitaanka tamarta waxaa ku jira isku-darka tamarta, sida caadiga ah kafeinka, kaas oo loo iibiyo siinta kicinta maskaxda iyo jirka. Waxaa laga yaabaa ama laga yaabaa in aan la siinin kaarboon waxaana laga yaabaa inay ku jiraan sonkor, macaaneeyaal kale, nuxurka dhirta, taurine, iyo amino acids Sidee cabitaanka tamarta u shaqeeyaa: Cabbitaannada tamarta waxay qabtaan sida magaca ka muuqata - waxay ku siinaysaa wareeg awood dheeri ah. Ka […]Read More
Faa'iidooyinka Adeegsiga Internetka Si Loogu Raadiyo Bixiyeyaasha Khadka Tooska ah ee saliida mustard
Warshadaha saliida iniin khardal le'eg ayaa si weyn u saameeyay hoos u dhaca qiimaha badeecadaha, laakiin taa micnaheedu maahan in aaggu qatar ku jiro. Xaqiiqdii, wali waa ganacsi shaqeynaya. Qaar badan oo ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha yaryar ayaa horeyba u soo maray awooddooda, waxaad kaloo heli kartaa kuwa waaweyn oo saliidda ka iibsada kuwa yaryar. Waa maxay xitaa […]Read More
Sida loo Doorto Shaaha Slimming
Shirkadaha ka dambeeya khafiifinta shaaha ayaa iyaguna dhankooda badeecada u keenay Shirkadaha shaaha ka dhigaya inay yareeyaan Alaab-qeybiyaha ayaa si toos ah u iibin kara badeecad, ama la shaqeyn kara Shirkad kale si ay u soo saaraan badeecooyin kala duwan oo lagu bixiyo qiimo dhimis gaar ah, ama lagu iibiyo qiimayaasha jumlada. Marka sidee u dooran kartaa shaah khafiifinaya sida […]Read More
Markay tahay jalaatada, waxa kaliya ee aad ubaahantahay waa magac yar oo aad jeceshahay gacmahaaguna horeyba way u cuncun kuwa ugufiican. Waxa ugu fiican ee ku saabsan warshadaha jalaatada ayaa ah inay badanaa yihiin xilliyo. Maaddaama macaamiil aad u badani ay doorbidaan iyaga inta lagu jiro xilliga qaboobaha, shirkado kala duwan ayaa u muuqda inay isu yimaadaanRead More
Shirkadaha Saliida Palmolien Waxay Ka Caawinayaan Shirkaddaada Inay Gaariso Yoolalka
Palmolien waxay saliideeda ka heshaa ilaha ugu fiican ee dabiiciga - keymaha roobka ee Ecuador. Saliidahan lagama maarmaanka ah waxaa loo adeegsadaa adduunka oo dhan soo saarista alaabada laga sameeyo kiriimyada daryeelka maqaarka, saabuunta dabiiciga ah, shumacyo, saliidaha, shaambooyada, cusbada qubeyska iyo waxyaabaha kale ee daryeelka shakhsi ahaaneed. Saliidaha Palmolien si buuxda ayaa loo horumariyay loona tijaabiyay, iyadoo la hubinayo in iibsadayaasha la hubiyo […]Read More
Faa'iidooyinka Malabka Buckwheat
Waxaad ka mid noqon kartaa kuwa badan oo wali doorbida inay u isticmaalaan malabka cunno ahaan halkii ay ka ahaan lahaayeen malabka buckwheat. Sababta tani way ka duwanaan kartaa iyadoo kuxiran sababaha aad u jeclaan laheyd inaad doorato malab buckwheat ah. Aynu eegno qaar ka mid ah sababaha loo doorbido malabka iyo faa'iidooyinka ku jira isticmaalkiisa [Read More